Ihe 5 ị ghaghị ịma gbasara Cisco CCNA Asambodo | Ọ BỤ
Cisco CCNA Asambodo
Kedu ihe bụ CCNA certific?
Kedu ụdị isiokwu bụ akụkụ nke Cisco CCNA certification?
Kedu ụgwọ ọ ga-ewe iji nyochaa nyocha Cisco CCNA?
Ebee ka m ga-enwe ike ịchọta ndị nduzi ọmụmụ CCNA n'efu?
Kedu esi eme atụmatụ maka ule CCNA Certification?
Oge na ịrụsi ọrụ ike iji nweta akwụkwọ ọkachamara na-adabere na ị ga-enweta ọganihu na ogologo oge. Cisco CCNA Asambodo bụ otu ihe omume dị otú ahụ nke nwere ike inye aka kwado ikike ọkachamara nke onye mmadụ na mpaghara ụfọdụ ma mee ka ọrụ nkwado na ọkwa ndị a.
A na - akpọ CCNA dị ka Cisco Certified Network Associate, usoro nyocha nke onwe ya. N'okwu ahụ mgbe nwoke nwetara nhapụta nke ọma, a na-ele ha dị ka ndị nwere nkà na nhazi usoro na ikike ndị metụtara.
A na-enyocha ule nyocha ahụ ma nye ya Cisco ọrụ zuru ezu. N'ilee ụzọ nke ọ bụla ụlọ ọrụ chọrọ nhazi ndokwa, nrite ahụ enwetawo nnukwu nkwalite n'etiti ndị ọkachamara IT na ọ bụ ihe dị iche iche n'etiti usoro mmemme kachasị amara nke ọma.
Ọ bụ ezie na usoro ihe a emeela maka afọ ole na ole ugbu a, nzukọ Cisco nke dị n'azụ akwụkwọ mmemme a na-eme ka ịmepe ma gbanwee isiokwu ndị ahụ na-ebute n'uche na ha ga-edozi usoro mgbanwe ụlọ ọrụ.
A na-edegharị ihe ngosi nke ọma na afọ 2013 mgbe ha wuru ọrụ dịgasị iche iche na-eme ka ndị ọkachamara nweta ụfọdụ nkà na otu. Nchikota nke gburugburu 9 dị iche iche CCNA agbanweta ugbu a na ị nwere ike ịchọta isiokwu ahụ pụrụ iche maka echiche gị n'ọdịnihu.
CCNA Cloud - Isi okwu a na-elekwasị anya n'ichepụta ihu igwe, ịkwakọba ihe na usoro Cisco. Site n'ichepụta igwe ọhụrụ na-emekarị ka ọ bụrụ nke a na-ahụkarị, a na-ele nke a anya dị ka iyi dị mkpa site n'aka ọtụtụ ndị na-anwale ule.
Mmekọrịta CCNA - Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nkwurịta okwu IP, ịhazi ubi nwere ike ịhọrọ Nkọwapụta nke bụ ihe na-aga n'ihu na-ekpuchi ihe ọhụrụ dị iche iche nke a kọwara na olu, data, vidiyo na ngwa ngwa.
CCNA Cyber ​​Ops - Asambodo mgbe okokụchara na-egosi ọkachamara onye bụ onye nchedo cyber nchebe nke akwadoro maka ilekọta nchebe dị elu nke otu mkpakọrịta.
CCNA Data Center - Isiokwu ndị e zoro na nyocha a kpọmkwem gụnyere iwu ụlọ ọrụ data, ịhazi usoro, nchịkwa data, ịkwado ngwa ngwa na ngwaike.
CCNA Industrial - Asambodo ahụ na-enyere mmadụ aka ịghọta usoro nhazi usoro na arụmọrụ achọrọ iji rụọ ọrụ ntọala ụlọ ọrụ nke ọma gụnyere mmanụ, gas, eletrik na mgbakọ.
Ntugharị CCNA na ngbanwe - Isi okwu nke Cisco na-eche na - ọ bụ ihe dị mkpa iji nweta nzere ntozu maka usoro niile na-ewuli elu ma bụrụ nyocha dị mkpa ọ bụla usoro ọkachamara nwere ike ijide.
Nche CCNA - Onye kwusiri usoro a kwadoro na o nwere ezigbo ihe omimi iji chekwaa data, nyochaa ohere ya, ikere òkè ma nwee ike inye aka dozie ntọala siri ike echedoro maka ụlọ ọrụ.
Onye na-enye ọrụ CCNA - Ndị na-arụ ọrụ maka ịchọta dịka ndị ọkachamara n'usoro usoro ga-enyere ndị mmekọ aka dịka ọrụ. Iji kpochaa usoro ahụ, ha chọrọ ka aptitudes dị ịrịba ama na mgbanwe siri ike na usoro nke ugbu a na nhazi usoro.
CCNA Ikuku - A na - ejikwa usoro ntanetị ọ bụla na - emepụta ihe ngosi dị iche iche mgbe onye ọkachamara kwụsịrị nyocha a n'ụzọ dị irè. Ha na-ahụ maka ndokwa, ịhụ ihe ngosi akara na ịmepụta usoro ikuku wireless.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla CCNA Asambodo na-enyocha ya, a ghaghị ịgbalị naanị ya. Cisco nwere ihe nyocha nke CCNA nke $ 295 maka ule. Atụmatụ ahụ nwere ike ịga n'ihu na mpaghara nke ị bi na ya, mgbanwe mgbanwe na ụdị dị iche iche. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịlele ụlọ ọrụ ahụ tupu i tinye akwụkwọ maka ule.
Ịchọpụta n'efu Ntụziaka ọmụmụ CCNA n'elu weebụ abụghị ụdị nsogbu dịka ị nwere ike iche. E nwere ole na ole ndị na-enye ọrụ na ndị na-anwale ule nwere ike inye onye ọ bụla n'ime isi nduzi n'efu.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ndị nduzi a nwere ike ịnweta ịntanetị dịka njikọ njikọta, na YouTube na site na saịtị ntụziaka, ị nwekwara ike ikweta ịnakwere ọrụ dị iche iche nke ndị òtù a na-eche. Ikwenye ịnakwere ụdị ọmụmụ ihe a na-enyere aka inweta ihe kachasị ọhụrụ Ntụziaka ọmụmụ CCNA dị ka ihe dị mkpa maka ihe ọ bụla na-efu na enyemaka ndị ọkachamara maka ndị na-enye ọzụzụ nke rụzuru ule Cisco.
Tupu i lee ule, ọ dị mkpa ịghọta na ọ dịghị ihe ruru eru iji lee ule ahụ maka olileanya. Ka o sina dị, na Ntugharị CCNA na ngbanwe bụ isi maka ule nke ọ bụla. A na-ele ya anya dị ka ihe na-adịghị mkpa, ọ ga-eme ka ị nwee ike ikpochapụ nyocha ndị ọzọ.
Na mpaghara itoolu iche iche iche iche iche iche iji chọpụta ya, nsogbu nke iwepụ ule ahụ na-adabere n'otú ị ga-esi nwee ahụmahụ n'ókèala.
Klas na ntụziaka CCNA bụ ihe dị mkpa iji ghọtakwuo usoro okwu ahụ tupu ị nwaa ule ahụ
N'ezie, ọbụna ọkachamara IT nke nwere ogologo oge nke itinye aka n'ọhịa kwesịrị ịtụle ndị nduzi na-atụgharị uche ma ghọta nhazi ajụjụ. Ọ ga-eme ka mmadụ nwee ike iru eru na isi ihe.
Nyochaa ọtụtụ nyocha omume, ọ bụ ụzọ kachasị mma. Ọ na-enyere aka ịmalite ịzụlite ihe omume gị, na-azaghachi azịza ngwa ngwa ma mee ka i guzosie ike na njedebe nke ule afọ ahụ n'enweghị ụjọ.
A na-enyocha ule a maka nchịkọta 1000 nke ị ga - eji 825 mee ka ị ruo.
Ọ dịkarịa ala, a ga-eji oge 30 mee ihe kwa ụbọchị iji wepụta akwụkwọ dị ka nkwupụta echiche bụ isi iji nweta gị Akaụntụ CCNA. Na ohere na ịchọtara ihe ọ bụla n'ime nsogbu ndị a, tụlee ịnyekwu ume ma ọ bụ jikọọ aka na-akwadebe ntụkwasị obi. Nyochaa nyocha n'efu na weebụ ma gbalịa ha kwa izu.
N'adịghị iche na ọtụtụ usoro mmemme ọkachamara ndị ọzọ, CCNA site na Cisco na-ele anya dịka nsogbu na ihe kpatara na ọ chọrọ ka onye ahụ buru ụba n'ụwa nakwa ihe atụ dị na ubi ha. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị na-etinye onwe gị n'inwe nghọta echiche ma na-ewere ya mgbe ịmechara ihe ọmụmụ ihe, ọ dị mfe mfe ịza ajụjụ na ezigbo ule.
Tụkwasị na nke a, ezigbo òtù dị iche iche n'ụwa nile na-achọ ndị ọkachamara na-ahazi na ha ga-esonyere ha. Ka ọ bụrụ nhazi nlekọta nchịkwa, onye nlekọta nche ma ọ bụ onye na-elekọta data ntanetị, gbasaa akụkụ ọrụ na-enye nhọrọ dị oke aka. Ihe omume na mmepe ọrụ nke a nyere CiscoAkaụntụ CCNA n'eziokwu na-edezi oge ejikere maka ịme onwe gị maka ule.